अमेरिकालाई उछिन्दै संसारकै धनी देश बन्यो चीन, चीनकाे सम्पति कति ? – Upahar Khabar
अमेरिकालाई उछिन्दै संसारकै धनी देश बन्यो चीन, चीनकाे सम्पति कति ?
प्रकाशित मिति : १ मंसिर २०७८, बुधबार ०७:४७ November 17, 2021
काठमाडौं – छिमेकी मुलुक चीनले महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकालाई पछि पार्दै विश्वकै धनी मुलुक बनेको छ । पछिल्लो २० वर्षमा चीनको सम्पत्ति तीव्र गतिले बढिरहेको छ । तर अमेरिकाको सम्पत्ति भने सोही गतिले बढेको देखिँदैन । कन्सल्टेन्सी फर्म म्याकिन्से एण्ड कम्पनीको ताजा रिपोर्टअनुसार पछिल्लो दुई दशकमा विश्वभरको कुल सम्पत्ति तीन गुणाले वृद्धि भएको छ ।
देउवा र निधी ३ दशक लामो सहकार्य तोड्दै आमनेसामने